Tetikasa-Hunan Nanbeiwang Biolojika Teknolojia Co., Ltd.
D-pantolactone dia manelanelana chiral manan-danja ho an'ny synt synt series ny D-pantothenic acid. Ampiasaina indrindra amin'ny synt synt pantothenic acid (vitamin B5) na sira calcium, D-panthenol (vitamin B5), D-pantoethylamine ary vokatra hafa.
Ny orinasanay dia manamboatra ny bakteria mikraoba mikraoba mikraoba izay mamokatra bakteria L-lactonohydrolase mamokatra bakteria sy haitao teknolojia mialoha ary teknolojia fanomanana ny tsy fahampiana, ary manomana D-pantolactone amin'ny lalana manaraka hanomanana ny D-calcium pantotheate:
Amin'ny alàlan'ny herintaona amin'ny fampivoarana ny teknolojia sy ny fizotran'ny fizotran-kery dia ampiasaina amin'ny fantsom-pamantarana E. coli amin'izao fotoana izao, ary ny hetsika fanaovana fermentation dia mahatratra 15000 U / L, ary ny fitrandrahana angovo azo antoka sy azo antoka, fanadiovana, fanavaozana ary immobilization voafaritra ny tsipika. Ny ranon-tsimihetsika dia misy fahadiovana avo lenta, hetsika immobilisation avo, hery tsara, fampisehoana filtration tsara, fahombiazana avo lenta amin'ny fizotry ny fiomanana amin'ny enzimma ny D-pantolactone, dingana tsotra ary ny kalitao tsara. Tamin'ny alàlan'ny fanamafisana ny teknolojia fanomanana ho an'ny fampidirana ireo mpandala an-tsokosoko tsy nahomby, ny teknolojia fanomanana ny fitaterana dia nitondra fihenan-danja lehibe tamin'ny fizotrany sy ny vidiny. Amin'ny alàlan'ny fitsapana kely sy antonony, ny hetsika immobilisation dia mahatratra mihoatra ny 100U / g, ary ny vatan'ny fiovam-po amin'ny fihodinana dia azo isaina hatramin'ny 100 eo ho eo araka ny habetsaky ny fitotongan'ny hetsika.